Iqoqo Lezici Eziphakeme ZikaDkt Stone Zokwenza Ucabange! - Okunye
Iqoqo Lezinhlamvu Ezihamba Phambili ZikaDkt Stone Ezizokwenza Ucabange!
UDkt Stone ucaphuna ama-anime kuthathwe kubalingiswa abalandelayo:
UDkt Stone uyi-anime ka-2019 abalandeli bakhuluma ngakho. Ihlukile, inezithombe ezinhle kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu: i- imibiko kule anime kukhona inhlanganisela yokugqugquzela ngezifundo ezithile zempilo ezithakazelisayo nezindlela zokuthatha.
Yilokho okuzogxilwa kukho lokhu okucashuniwe. Ukwabelana ngezingcaphuno ezinhle kakhulu zikaDkt Stone i-anime okufanele inikele ngayo.
1. Izilinganiso zikaByakuya Ishigami
'Uma uzimisele, ungafeza noma yini ngokusebenzisa inkuthalo yesayensi.' - Byakuya Ishigami
2. Izilinganiso zeSenku Ishigami
“Bengiqinisekile ngamaphesenti ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi ukuthi uyaphila. Akunandlela yokuthi umfana obezimisele ngokuvuma kuYuzuriha anikezele ngemuva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa nje. Awubuthakathaka kangako. ” - USenku Ishigami
“Ake ngikufundise, Oaf omkhulu…. Akukhona ukuthi kunezinto isayensi engakwazi ukuzichaza. Ubheka imithetho ngemuva kwalezo zinto. Isayensi yigama nje kuphela lomzamo wokuzinza, wokudonsa izinhlungu obhekene nawo. ” - USenku Ishigami
“Kungumzamo ohamba kancane kodwa ozinzile. Ngizoshaya inganekwane nesayensi. Lokhu kuyasijabulisa. ” - USenku Ishigami
'Indoda encoma umuntu ebusweni igcwele izisusa ezingezinhle.' - USenku Ishigami
'Akukho ongeke wakwenza uma uzama.' - USenku Ishigami
'Ngizosebenzisa amandla esayensi ukutakula wonke umuntu oyedwa.' - USenku Ishigami
3. Izilinganiso zeTsukasa Shishio
'Ngizonithembisa into eyodwa: nina nobabili ngeke nisaba sengozini futhi.' - Tsukasa Shishio
4.Izilinganiso ze-Taiju Oki
“Ngakhelwe ukuhlala isikhathi eside senginamandla amaningi okusala ngawo. Angideli. ” - UTaiju Oki
Nayi Yonke I-BEST Digimon Quotes Abalingiswa Bama-Anime Bazothanda
Zonke Izingcaphuno Ezinkulu Kunazo Zonke ZaseYugioh Ezake Zwakala